China Jumbo Bag Belt webbing FIBC hombe bhegi chiuno kucheka Muchina FIBC-6/8 fekitori uye vagadziri | VYT
Jumbo Bhegi Bhandi kurongedza FIBC hombe bhegi chiuno Kutema Muchina FIBC-6/8
FIBC hombe bhegi chiuno Kucheka Muchina unosanganiswa ne otomatiki kuyera, otomatiki kudhiza, uye otomatiki kucheka uye inotora servo mota kudzora iyo yekucheka urefu iyo inoshamisa kune yayo yakakwira kumhanya, yakaderera yakadyiwa uye yakakwira otomatiki
FIBC - 6/8 Webbing Kucheka Muchina ndiyo yakakwidziridzwa vhezheni yeFIBC - 4/6 Webbing Kucheka Muchina. Iyo furemu yakawedzerwa, irabha roller uye ruva roller rinotambanudzwa, uye zvimwe zvikamu zvinoshandurwa.
Iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvechipfuramabwe hupamhi hwe 70mm-10 mm, 6-10 mitsetse inogona kutemwa panguva imwechete panguva imwe chete, uye hupamhi nedhivha yakatetepa inogona kugadziriswa nekugadzirisa tsvimbo maererano nebandwidth.
1. Servo yakagadzika kureba kutonga kunogamuchirwa, paramende yekumisikidza inongonongedzwa zvakananga nevanhu-muchina interface.
2. Industrial computer (PLC) inoshandiswa kudzora mashandiro, kumanikidza roller inodzorwa ne solenoid vharuvhu uye humburumbira, iine chinogadziriswa chinomanikidza, mashandiro akareruka, marara mashoma emusoro.
3. Kumaka kwakarurama uye kucheka.
4. High kugadzirwa kunyatsoshanda.
Kucheka upamhi （mm）
Kucheka kureba (mm)
Kucheka kunyatsoita （mm）
Kugadzira kugona c pc / min）
Dot daro (mm)
1. VYT Loop yakatemwa yaigona kucheka yakatarwa kureba nekupisa kucheka otomatiki.
2. Iyo yakasimba pneumatic yekumusoro uye yakaderera yekudyisa inovimbisa iwo maficha pane akasiyana.
zvinhu zvine yakafanana yakakwira kucheka kureba kwakaringana.
3. Sling upamhi isingasviki 7mm yaigona kucheka mitsetse mitanhatu uye mitsetse misere, uye chipfuramabwe nepakati pe10 -17mm chaigona kucheka mitsetse 4-8 panguva imwe chete.
Iyo inokodzera bhandi, ribhoni, bhandeji, bhandi rechisimbiso, tambo yeparachuti, pp bhendi, bhegi bhandi rekucheka kureba.
1. Cylinder girisi.
Kana iyo humburumbira ikashandiswa kwenguva yakareba, inoyerera mvura iri musilinda icharasika.
Tsvaga iyo yekuparadzanisa yemafuta-emvura.
Vhara iyo separator yemafuta-yemvura uye pusha iyo vharuvhu nemaoko.
Sunungura iyo kapu yemafuta, wedzera chakakodzera chiyero chemafuta uye nekumisazve panzvimbo yekutanga. (turbine mafuta 1 inogona kushandiswa)
Ongorora: iyo kapu yemvura ine idhaidhi kuruboshwe uye kapu yemafuta kurudyi.
2. Iko kubatana pakati pekutakura nemuchina wakatsetseka.
Wedzera zvakaenzana chiyero chemafuta.
Pashure: FIBC Jumbo Bhegi Yekuchenesa Muchina ESP-A
Zvadaro: Jumbo Bhegi FIBC Mucheka Kucheka Muchina CSJ-2200
Otomatiki Webbing Kucheka Machine
Fibc Big Bag Chifuramabwe Kucheka Machine
Fibc Sack Belt otomatiki Kutema Muchina
Yekumhanyisa Yekumhanyisa Fibc Kusimudza Bhandi Tepi Kucheka Muchina
Jumbo Bhegi Bhandi Webbing Fibc Big Bhegi Tambo Kucheka Muchina
LoopCUT webbing FIBC / hombe bhegi yekucheka muchina FI ...